Siyaasiga Maxamed Xaashi oo eeddaymo u soo jeeddiyay Xisbiga WADDANI
Monday November 18, 2019 - 20:10:05 in News by A. Asbaro
Kampalla(HWN):-Eng. Maxamed Xaashi Cilmi oo ka mida Siyaasiyiinta ku middaysan Madasha wada-tashiga Somaliland, oo maanta ka hadlay Xaaladda qalafsan ee dalku ku jiro, ayaa waxa uu eeddayn dusha u saaray Xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI.
Siyaasiga Eng. Maxamed Xaashi Cilmi waxa uu Xisbiga WADDANI ku eeddeeyay inaanay Madaxweyaha sharafkiisa dhawrayn, isla markaanna waxa uu sheegay in WADDANI aannay adeegsan kalmadda ah Madaxweyne, balse yidhaahdaan Muuse, taasoo uu sheegay inay khalad ku tahay maamuuska Madaxweynaha.
"WADDANI xitaa Madaxweyne ma yidhaahdo ee waxay yidhaahdaan Muuse, taasinna daw maahee waa Madaxweynaha dalka, dadkunna ixtirraam ayaa la isku leeyahay, waa inaad ka soo degtaan halkan aad taagan tihiid"
Eng. Maxamed Xaashi Cilmi oo ka tirsan Siyaasiyiinta Madasha wada-tashiga Somaliland, waxa uu Xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI uu ku eeddeeyay inay waxkasta xumaynayaan, maaddaama ay waayeen doorashaddii Madaxtinnimada dalka waayeen, waa sida uu hadalka u dhigaye, waxaannu yidhi "Doorashaddii haddaan waayay waxkastaba ha xumaaddeen waa wax aan loo baahnayn sida runtiiya, kolkaa waxa lagaa rabbaa inaad Madaxweyne tidhaahdo" Ayuu yidhi Eng. Maxamed Xaashi Cilmi.